661 Ikhaya loMthi laseThai elineNjilo yangoku
Igumbi lakho lokulala e indlu ekumhlaba osikelwe izindlu sinombuki zindwendwe onguRenate
I-661 likhaya lemveli laseThai elenziwe lanamhlanje ngumyili waseSwitzerland. Ikhaya leplanga liqhayisa umphandle wangaphambili kunye nokuchukumisa kwangoku kunye nokukhululekile ngaphakathi ngaphakathi njengeendonga ezitywinwe ngokupheleleyo, iifestile ezinkulu zeglasi kunye neentambo ezintle zokuhombisa. Iimbono zeentaba ezidumileyo zePai zingonwatyelwa kwibalcony kunye nendawo yokuhlala ngelixa iindwendwe ziphumla ngesitayile. Eli khaya limnandi losapho libonisa ivenkile yekofu kumgangatho ophantsi kwaye iindwendwe zivuswa livumba elitsha lekofu.
Wonke umgangatho ophezulu weli khaya linomtsalane uyafumaneka ukuba urente kwaye ulinganisa i-51 square metres iyonke. Iindwendwe zijongelwe ukufikelela ngasese, ibalcony yabucala, indawo yokuhlala, amagumbi amabini okulala, indawo yokunxiba kunye nekona yekofu/yeti enefriji. Igumbi lokuhlambela elicocekileyo nelanamhlanje le-6 square metre liza liphelele kunye nebhafu.
Kukwakho negadi enkulu ekwabelwana ngayo ukuze iindwendwe ziyisebenzise, enendlu yokudlala eyenziwe ngamaplanga yabantwana kunye nomgodi wesanti. Ikhitshi lasekuhlaleni emva kwendlu lixhotyiswe ngokupheleleyo kwaye lingasetyenziselwa ukulungisa ukutya okulula. Kukho indawo yokupaka iimoto kunye nezithuthuthu ngaphambili kwendlu.
Igumbi lokulala eliPhambili
I-12 yeemitha zesikwere kunye nebhedi ekhululekile kabini. Iindwendwe zinokukhetha kwi-air-conditioning okanye ifeni.
Igumbi leeNdwendwe/Igumbi labantwana
Ilungele abantwana ababini okanye iindwendwe, eli gumbi le-fan le-12 square metre linebhedi entle eyakhelweyo eyenziwe ngamaplanga kunye nebhedi enye. Eli gumbi likwaza nefeni kunye ne-air-conditioning.
Nceda uqaphele: Ngenxa yendawo esikuyo engaphezulu kwevenkile yekofu kunye nendawo yentengiso yangoLwesithathu ethandwayo kunokubakho ingxolo njengoko ilindelwe kubomi bemihla ngemihla kunye netrafikhi, ayifane ichaphazele iindwendwe zethu kodwa ukuba unovelwano kwingxolo le isenokungabi yeyona nto ilungileyo. kufanelekile.
Idumile kwiintsapho kunye nabahambi abafuna uxolo kunye nokuzola, le ndawo inomtsalane kwaye inobuhlobo inenani leekhefi kunye neendawo zokutyela zaseNtshona. Rhoqo ngeveki le ngingqi ibamba imakethi yangoLwesithathu, eyindawo entle yokuthenga imveliso yalapha ekhaya, ukuthenga izinto ezikhumbuzayo kwaye ufumane amagqabantshintshi eenkcubeko zeenduli. dibana nabantu abatsha
Umbuki zindwendwe ngu- Renate
Nangona abanini bengahlali kwipropati, umphathi wepropati uhlala ekulungele ukuphendula imibuzo kunye nokuncedisa iindwendwe.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Pai District